May | 2018 | Hassan Mudane
Baaris Akademiyeedka Cilmiga Bulshada: Casharkii 15aad
May 14, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Weyddiin Baarineedka Casharkii afar iyo tobanaad waxa aynu ku soo baranay aaladda daawashada kaqaygalaha (Participant observation). Casharkan waxa aynu ku baran doonaa weyddiin baarineedka (research question) cilmibaarista. Weyddiin baarineedku waa in uu yahay mid ku fadhiya mowduuca uu cilmibaaruhu xiisaynayo; ka hor inta uusan dhigan weyddiintu, marka hore wuxuu baadigoobayaa mowduuca xiisa galinaya. Weyddiin baarineedka […]
Itoobiya: Qaran u baahan sheeko cusub
May 12, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· 2 Comments
Boqoradii waxay sheegeyn sheeko. Meles wuxuu sheegay sheeko. Abiy [Ahmed] isagana wuxuu u mucurteysan yahay in uu sheeko sheego. Dhammaadkii boqortooyadii Zagwe, ee ku beegnayd qarnigii afar iyo tobanaad, xilligaasi Itoobiya waxay qarka u saarnayd kala firdhasho. Dagaal-oogeyaashii maamul gobaleedyada waxay ku loollamayn figta sare [awoodda dalka] halka qarankiina uu dhex maquuranaayay kala qoqobnaansho. […]
BAARIS AKADEMIYEEDKA CILMIGA BULSHADA: CASHARKII 14AAD
May 5, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Daawashada Kaqaybgalaha Casharkii saddex iyo tobanaad waxa aynu ku soo baranay sida uu cilmibaaruhu u wareysan karo dadka madaxda ah ama siyaasiyiinta. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa aaladda daawashada kaqaybgalaha (participant observation) ee cilmibaarista. Daawashada Kaqaybgalaha-marka cilmibaaruhu laftirkiisu uu qayb ka yahay tijaabada (Experiment), isaga oo dowrkiisuna yahay in uu daawashado dareenka, ficilada iyo […]